पुष ४ गते शनिबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! | सुदुरपश्चिम खबर
व्यापार व्यवसायमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुनेछ। आय बढ्नेछ। वाहन सुख प्राप्त हुने सम्भावना छ। सामाजिक सन्दर्भमा यात्राको योग बन्ने देखिन्छ। यात्रा रमणीय र लाभदायक हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा विशेष सफलता मिल्ने सम्भावना उच्च छ। आर्थिक लाभ प्राप्त हुनसक्छ।
वृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Tauव्यापार बिस्तार हुनेछ। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि दिन शुभ रहनेछ। कार्य सफलता प्राप्त गर्नमा ढिलाइ हुनसक्छ। मध्यान्हपछि व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना हुनेछ। पदोन्नतीको योग रहेको छ। बुबा तथा अग्रजबाट लाभको आशा गर्न सकिन्छ।
खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। अन्यथा स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। गाडी चलाउँदा ध्यान दिनुहोस् र क्रोधलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। यस दिन नयाँ काम सुरू गर्न राम्रो दिन होइन। साथी-भाईसँग रमणीय भेटघाट हुने सम्भावना छ। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ।
व्यपार व्यवसाय विस्तार हुनेछ। आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना उच्च छ। ब्याज, दलाली आदि मार्फत आय बढ्ने सम्भावना छ। आर्थिक आयको कारण आर्थिक समस्या हट्नेछ। स्वादिष्ट भोजनका साथै नयाँ वस्त्र पाएर तपाईं प्रशन्न हुन्हुनेछ। छोटो यात्राको योग छ।
कला क्षेत्रमा तपाईंको रुचि बढ्नेछ। व्यवसाय क्षेत्रमा विकास हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ। व्यापारमा समय अनुकूल रहनेछ। प्रतिस्पर्धी पराजित हुनेछन्। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहला। आर्थिक स्थिति मजबूत हुनेछ।
तपैजंको लागि यस दिन मध्यम फलदायी रहनेछ। आमाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन जरूरी देखिन्छ। पारिवारका सदस्यसँग वादविवाद हुनसक्छ। मध्यान्हपछि स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। सिर्जनात्मक कार्यमा मन लाग्नेछ। विद्यार्थीहरूको लागि समय अनुकूल छ।
घरेलु जीवनमा रहेका समस्या हट्नेछ। भाई-बहिनीसँगको सम्बन्ध अझ बलियो हुनेछ। मध्यान्हपछि काममा कठिनाइहरू बढ्नेछ। तपाईं शारीरिक र मानसिक चिन्ताको अनुभव गर्नुहुनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग मतभेद हुन सक्छ। धनहानिको योग रहेको छ।
व्यापार क्षेत्रमा अनुकूल वातावरण रहनेछ। हरेक काम सरलताका साथ सम्पन्न हुनेछ। गृहस्थजीवनमा उग्र वातावरण रहनेछ। निर्णय शक्तिको अभाव हुनेछ। घरका कामहरूमा पैसा खर्च हुन सक्छ। पूँजी निवेशको लागि शेयर बजार तपाईंको लागि अनुकूल हुनेछ।
आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना उच्च छ। व्यापार क्षेत्रमा पनि लाभ प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा सुख र शान्ति छाउनेछ। रमणीय यात्राको योग बन्नेछ। साथी-भाईबाट लाभको आशा राख्न सकिन्छ। धार्मिक कार्यमा बढी पैसा खर्च हुनेछ। परिवारमा शान्तिमय वातावरण हुनेछ।